Siri dia mamela anao hifehy ny Apple Music | Vaovao IPhone
Betsaka amintsika no manaiky izany Siri dia mety ho somary manjavozavo miaraka amin'ny valiny vitsivitsy raha ampitahaintsika, ohatra, amin'ny Cortana. Fa ny tsy ifandresen'ny olona dia ny hoe, toa ny zava-drehetra mifandraika amin'ny rafitra fiasan'i Apple, ny fampidirana azy amin'ny iOS dia ambony indrindra. Noho io fampidirana io dia afaka mifehy saika ny zava-drehetra amin'ny iPhone isika ary, ahoana no tsy ahafahantsika mifehy ny fampiharana Music.
Araka ny efa fantatrareo, Apple dia nandefa ny serivisy mozika mivantana tamin'ny 30 Jona ary te hanatevin-daharana ny antoko ilay mpanampy virtoaly an'ireo avy ao amin'ny Cupertino. Miaraka amin'i Siri ary mampiasa ny baiko marina, afaka mitendry rakipeo, hira tokana na koa hira amin'ny taona iray manokana isika, izay hamonjy fotoana sy hanome antsika fampiononana amin'ny tranga sasany. Eto ambany ianao dia afaka mahita ohatra vitsivitsy.
Voalohany indrindra dia milaza fa, raha mbola tsy manao zavatra amin'ny fiteny Siri i Apple dia sarotra ny mangataka hira na kapila sasany amin'ny fiteny hafa. Raha hanafatra zavatra amin'ny teny Anglisy dia matetika izy no mandray raha miteny ilay hira / rakikira / mpanakanto amin'ny teny Spanglish isika, izay midika fa tsy maintsy tononinay ilay lahatsoratra toa ny tamin'ny Espaniôla. Ohatra, hoy aho DIE MAI DARLIN mba hanao ahy ho "Die My Darling."
Lazao ihany koa fa ny baiko nampiasako dia ampitao aho y Milalao, arakaraka ny tranga.
1 Play Beats 1
2 Mitendry radio avy amina mpanakanto
3 Milalao mpanakanto / vondrona iray
4 Mametraha hira amin'ny taona iray manokana
5 Mitendry hira manokana
6 Mandingana hira iray
7 Teneno izy hametraka hira X amin'ny filaharana
8 Jereo hoe inona no milalao
9 Lazao azy fa tianay ny hira
10 Alefaso bebe kokoa toa ilay hira ankehitriny
11 Ampio amin'ny tranombokinay
12 Mangataha kinovan'ny hira manokana
13 Volume ambony / ambany
Manomboka amin'ny baiko izay ahafahantsika mitendry ny onjam-peo Apple Music 24/7. Ny baiko nampiasako dia Omeo ahy ny radio Beats 1. Hanomboka hilalao avy hatrany ity radio ity. Tsotra sa tsy izany?
Mitendry radio avy amina mpanakanto
Afaka mangataka anao izahay hitendry radio avy amin'ny mpanakanto. Mba hanaovana izany dia mila miteny fotsiny isika «Play Radio -nantsoin'ny vondrona- «. Tsy mandeha foana izany satria misy vondrona na hira tsy hanana radio vonona, fa miara-miasa amin'ireo mpanakanto malaza indrindra izy io ary zavatra iray ampiasako betsaka. Tamin'ny radio Sonic Syndicate no nahitako an'i Amaranthe, vondrona tiako.
Milalao mpanakanto / vondrona iray
Na dia nangatahiko aza izy mba hilalao azy io tsy misy hatak'andro, i Siri dia efa milalao azy io tsy misy filaharany intsony. Raha tiantsika izy hanao izany araka ny filaharany, dia mila miteny aminy isika mba hitendry rakikira manokana ho antsika.
Mametraha hira amin'ny taona iray manokana
Raha tsy manana ny tsirony "manokana" ananako ianao dia afaka mangataka amin'i Siri hitendry mozika anay amin'ny taona iray manokana. Ohatra, hoy izahay «apetraho mozika ho ahy hatramin'ny 1990 ″ ary hitady ho azy ireo ny katalaogram-pitsarana amin'ity taona ity. Mieritreritra aho fa tokony nanontany tamin'ny 1991 aho izay taona Guns N 'Roses Use Your Illusion 1 sy 2 no nivoaka 😉
Mitendry hira manokana
Azontsika atao koa ny mangataka anao hilalao hira manokana. Raha manao an'io isika dia hampitandrina antsika fa hofafana ny lisitra izay hatao manaraka fa tsy miraharaha isika, sa tsy izany? Ny tsara indrindra dia ny miteny «Play X hira»Ho antsika hitafy azy.
Mandingana hira iray
Raha milalao onjam-peo, rakikira na hira maromaro isika dia afaka mandingana ilay iray izay milalao. Noho izany dia tsy hilaza afa-tsy izahay «mandalo hira«. Azontsika atao koa ny milaza azy hilalao ilay hira teo aloha.
Teneno izy hametraka hira X amin'ny filaharana
Raha miteny isika «Aorian'io dia asio hira X aho', Tena hanao izany. Hapetrany manaraka sy eo alohan'ilay lisitra efa anananay ny filaharana ilay hira anontaniantsika azy.
Jereo hoe inona no milalao
Araka ny fantatrao, avy amin'ny iOS 8 dia afaka manontany an'i Siri isika «Inona no atao?»Mba hilazana aminay ny hira henonay misaotra an'i Shazam. Raha mihaino zavatra avy amin'ny Apple Music na ny tranombokintsika isika, fa tsy mahita miaraka amin'i Shazam, dia hiteny mafy ny lohaten'ilay hira sy ilay mpanakanto.
Lazao azy fa tianay ny hira
Afaka milaza aminao koa izahay «Tiako ity hira ity«. Ny fangatahana azy amin'izany dia hanampy antsika amin'ny hira izay milalao ny fony, izay tsara ho an'ny fahazoan-dàlana atolotra kokoa hitovy amin'ny fitiavantsika mozika.
Alefaso bebe kokoa toa ilay hira ankehitriny
Lazao aminy "Milalao hira bebe kokoa toa ity»Tonga soa, indrindra raha mihaino radio manokana isika. Tsy mandeha amin'ny hira maro tsy malaza izy io, fa mandaitra amin'ny ankamaroan'ny hira pop. Manantena aho fa hihatsara izany amin'ny ho avy.
Ampio amin'ny tranombokinay
Raha, araka ny nolazaiko teo, fa mihaino radio manokana isika, dia azontsika atao ny manampy ilay hira milalao ao amin'ny tranombokintsika iCloud. Izy io koa dia mandeha raha toa ka nametraka rakikira manokana izahay, izay nilazanay hoe «ampio ao anaty tranombokiko ity rakikira ity".
Mangataha kinovan'ny hira manokana
Raha angatahinay ny hitendry hira iray dia i Siri no hitendry ilay hira voalohany na malaza indrindra ho antsika. Raha mila iray hafa isika dia mila milaza amin'ilay vondrona milalao ilay kinova ankafizinay fotsiny. Amin'ity tranga ity dia nolazaiko taminy «Alefaso ilay hira DIE MAI DARLING nataon'i METÁLICA«. Tsy hoe tsy mahay manoratra aho fa efa nolazaiko anao hoe ahoana ny fahaizany amin'ny teny espaniola satria raha tsy izany dia tsy mahazo antsika matetika i Siri.
Volume ambony / ambany
Zavatra tsy vitako ny nanandrana azy satria tsy manana aho dia afaka mampiakatra na mampidina ny feon'ny mozika avy amin'i Siri ianao. Heverina fa raha nampifandray mpandahateny Bluetooth na karazana headphone hafa isika (tsy mandeha ireo tariby) dia azonao atao ny manova ny feon'ny mozika. Azonao atao ve ny manamafy izany ho ahy?
Azo antoka fa misy baiko misimisy kokoa hifehezana ny mozikantsika avy amin'i Siri, saingy ireo no notandramako sy notsapako ho ahy. Aza misalasala miala amin'ny fanehoan-kevitra raha mahita baiko mahaliana ianao fa tsy hisalasala hanampy izany amin'ny lisitra aho.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Siri » Siri dia mamela anao mifehy ny Apple Music miaraka amin'ny baikon'ny feo ihany koa
rspandres dia hoy izy:
Fandraisana anjara tsara !!!! Toy ny feno fankasitrahana hatrany
Mamaly an'i rspandres
APPLE MUSIC = GARBAGE .. maninona aho no mandoa famandrihana isam-bolana? raha tsy misy ireo hira farany na "henoina" be mpihira indrindra avy amin'ny mpanakanto maro, raha tsy hoe manara-maso amin'ny iTunes ianao. Aorian'io, inona no tsy mampitovy azy raha mampitaha azy amin'ny Spotify. Ary jereo, nisoratra anarana tamin'ny Apple Music te-hanala ny Spotify Premium aho, mazava fa tsy maintsy manohy izay nananako aho. Mba hanaparitahana azy io, ny lisitra ataoko dia tsy mitambatra amin'ny iTunes, tsy maintsy ampidiriko ao anaty Mac ny iPhone mba hananako azy ireo amin'ny solosaina roa. PATETIC ... rehefa miaraka amin'ny Spotify dia manao irery samirery tsy mampifandray na inona na inona ary ny fitaovana rehetra ananako dia avy amin'i Apple. Ahoana no ahafahan'ny fampiharana antoko fahatelo miasa tsara kokoa noho ilay voalohany noforonin'i Apple amin'ny fitaovany? Tsy lazaina intsony ny taranaka faramparany an'ny iPod… izay miasa tsara kokoa ary Spotify dia manana fahafaha-manao betsaka kokoa noho ny Apple Music an'ny OS, ny haavon'ny hadalana.